09 October, 2018 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Sucuudi Carabiya kadib casuumaad uu ka helay Boqor Salman bin Abdulaziz.
Wasiirka warfaafinta xukuummadda federaalka Soomaaliya, Amb. Daahir Maxamuud Geelle, oo ka warbixiyay safarka ayaa sheegay in ra’iisul wasaare khayre iyo madaxda dalka Sucuudiga ay yeelanayaan kulamo looga hadlayo xoojinta xariirka walaaltinimmo ee labada dal ka dhexeeya, isbedellada gobolka iyo guud ahaan caalamka.
Ra'iisul Wasaare Kheyr" Waxaan dhiseynaa Galmudug mideysan"
Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Dalka Oo Kulan La Qaatay Guddiga Gobalka Banaadir Ee Qaban-qaabada Xuska Xorriyadda.
Ciidamo hubeysan oo kusii jeedda Dhuusamareeb
Ra'iisul Wasaare Kheyre oo Magacaabis sameeyay
Madaxweyne Trump oo kusii jeeda Magalada london
Ra'isalwasaare ku xigeenka oo shir guddoomiyay kulan ku saabsanaa amniga Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo Sucuudiga kula kulmay R/Wasaare Ku Xigeenka Malaysia.
Ra'iisul Wasaare Kheyre oo safar aan horay loo sii shaacin ugu ambabaxay Qatar
Ra'iisul Wasaare Kheyre oo kusii jeedda Dooxa
Maxay ka wada hadleen RW Kheyre & Odayaasha Dhaqanka deegaanada Galmudug? Visits: 1
Maxkamadda ICJ oo shaacisay xilliga dib loo dhegeysan doono dacwadda Badda Somalia iyo Kenya Visits: 0
WHO and UNICEF call on all Somalis to vaccinate children against polio Visits: 0